Ɔde kɔmaa Efesofo 1:1-23
Honhom fam nhyira (3-7)
Waka nneɛma nyinaa abom wɔ Kristo mu (8-14)
Bere a wahyɛ no sõ a, “obedi nneɛma ho dwuma” (10)
Wɔde honhom kronkron sɔɔ mo ano yɛɛ nea ɛbɛba daakye ho “adanse a edi mu” (13, 14)
Efesofo gyidi nti, Paul daa Onyankopɔn ase, na ɔbɔɔ mpae maa wɔn (15-23)
1 Me Paul a menam Onyankopɔn pɛ so yɛ Kristo Yesu somafo no, merekyerɛw akɔma akronkronfo a wɔwɔ Efeso+ a wɔyɛ anokwafo wɔ Kristo Yesu mu: 2 Yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom ne asomdwoe nka mo. 3 Ayeyi nka yɛn Awurade Yesu Kristo Agya ne ne Nyankopɔn, efisɛ ɔde honhom fam nhyira nyinaa bi ahyira yɛn Kristo mu wɔ ɔsoro.+ 4 Ɛno nti na ɔpaw yɛn kaa ne* ho ansa na wɔrehyɛ wiase ase, sɛ yennya ɔdɔ na yɛnyɛ kronn a dɛm biara nni yɛn ho+ wɔ Onyankopɔn anim. 5 Na esiane sɛ ɛyɛ ne pɛ na ɛsɔ n’ani+ nti, ɔhyɛ too hɔ+ sɛ ɔnam Yesu Kristo so begye yɛn aba ne nkyɛn sɛ ɔno ara ne mma,+ 6 sɛnea ɛbɛyɛ a nkurɔfo bɛkamfo Onyankopɔn adom+ kɛse a ɔnam nea ɔdɔ no no+ so de adom yɛn no. 7 Ɛnam nea ɔdɔ no no mogya so+ na yɛanya ogye, kyerɛ sɛ, yɛanya bɔnefakyɛ,+ sɛnea n’adom bebrebe no te. 8 Adom yi, ɔma ɛboroo so maa yɛn wɔ nyansa ne ntease nyinaa mu. 9 Nea ɔyɛe ne sɛ, ahintasɛm kronkron+ a ɛfa n’apɛde ho no, ɔdaa no adi kyerɛɛ yɛn. Esiane sɛ ɛsɔ n’ani nti, ɔno ankasa bɔɔ ne tirim sɛ, 10 bere a wahyɛ no so a, obedi nneɛma ho dwuma* na waka nneɛma nyinaa abom bio wɔ Kristo mu, nea ɛwɔ soro ne nea ɛwɔ asaase so.+ Ne mu na ɔbɛka nneɛma nyinaa abom. 11 Ɔno na yɛne no ayɛ baako, na wɔayɛ yɛne no nyinaa adedifo,*+ efisɛ nea otumi yɛ biribiara a ɔpɛ ma n’atirimpɔw ba mu no ahyehyɛ no saa, 12 sɛnea ɛbɛyɛ a, yɛn a yɛadi kan anya Kristo mu anidaso no nti, nkurɔfo beyi Onyankopɔn ayɛ na wɔahyɛ no anuonyam. 13 Na mo nso bere a motee nokware no, kyerɛ sɛ, mo nkwagye ho asɛmpa no, munyaa anidaso wɔ ne mu. Bere a munyaa ne mu gyidi no, wɔnam no so de honhom kronkron a Onyankopɔn hyɛɛ bɔ sɛ ɛbɛba no hyɛɛ mo nsow.+ 14 Saa honhom no yɛ agyapade a yɛn nsa bɛka daakye no ho adanse a edi mu.*+ Nea enti a wɔahyɛ mo nsow ne sɛ, ɛbɛma Onyankopɔn ankasa nkurɔfo*+ anya ogye,+ na ɛde ayeyi ne anuonyam abrɛ no. 15 Eyi nti me nso, efi bere a metee sɛ mowɔ Awurade Yesu mu gyidi na moakyerɛ sɛ modɔ akronkronfo nyinaa no, 16 daa meda Onyankopɔn ase ma mo. Migu so ara bɔ mo din wɔ me mpaebɔ mu; 17 mesrɛ sɛ anuonyam Agya a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn no bɛma mo tumi a mode behu nyansa na moate nneɛma a oyi kyerɛ yɛn no ase, na moanya nokware nimdeɛ.+ 18 Onyankopɔn abue mo komam, sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu anidaso a ɔde ama mo, ne nneɛma pa a ɛkyɛn so a ɔde ahyɛ akronkronfo bɔ+ no, 19 na moahu sɛnea ne tumi ne n’ahoɔden yɛ kɛse boro so ma yɛn a yɛyɛ gyidifo no.+ Saa ahoɔden no da adi wɔ sɛnea ne tumi yɛ adwuma no mu; 20 Ɛno na ɔde di boaa Kristo, bere a onyan no fii awufo mu na ɔde no tenaa ne nsa nifa+ wɔ ɔsoro no; 21 ɔde no tenaa baabi a ɛkorɔn koraa sen aban, tumi, ahoɔden, ne mpanyinni nyinaa, ne edin biara,+ ɛnyɛ wiase yi* mu nko, na mmom nea ɛreba no nso mu. 22 Ɔde nneɛma nyinaa nso guu ne nan ase,+ na ɔyɛɛ no biribiara so panyin* wɔ asafo no mu;+ 23 asafo no ne ne nipadua,+ na ɔno a ɔhyɛ ade nyinaa mã no, ɔno na ɔhyɛ asafo no mã.
^ Anaa “ɔbɛtoto nneɛma.”
^ Anaa “yɛn nsa bɛka no ho sika a wɔde ato ase (ntoase); nea ɛbɛba akyiri yi ho anohoba (bɔhyɛ).”
^ Nt., “agyapade.”
^ Anaa “nneɛma nyinaa ti.”